Waxbarasho dugsi sare | Samfunnskunnskap.no
Xogo ku saabsan waxbarashada dugsiga sare
Dhammaan dhallinyarada dhammaysatay dugsiga hoose/dhexe ah ee Norwey ama mid u dhigma, waxay xaq u leeyihiin saddex sanno oo waxbarasho dugsi sare ah.
Dhallinyaradu waa inay dhammeystaan waxbarashada dugsiga sare ilaa sannadka ay buuxiyaan 24 sanno.
Gobolka ayaa bixiya waxbarashada dugsiga sare waajibma ka saaranyahey inay u soo bandhigaan dhammaan cida xaqa u leh.
Waxbarashada dugsiga sare waxa ay leedahay qayb waxbarasho sare lagu galo iyo mid farsamo gacmeed ah
Dugsiga hoose/dhexe iyo dugsiga sare
Dhallinyaradu way dhammeeyeen dugsiga dhexe marka ay ilaa16 sanno jiraan. Shaqo badan oo sidaas ah looma hayo dadka dugsi hoose/dhexe oo keliya qaatay, inta badan dhammaan waxay doortaan in dugsi sare sii wadaan.
Dugsiyada sare ee dawladda waxa dheer in la helo tiro dugsiyo ah oo gaar loo leeyahay. Iskuulada gaarka loo leeyahay qoysku lacag ayey ka bixiyaan waxbarashada. Sidaas oo ay tahay haddana waa qaybtooda uun intay bixinayaan, inta hadhay ee booska qiimihiisu yahay dawladda ayaa bixinaysa.
Xirfadaha badankooda iyo shaqooyinka bulshada ee maanta waxa u daruuri ah waxbarasho dugsi sare ama waxbarasho jaamacadeed. Waxa kale oo u daruuri ah bulshada daryeelka in dadka inta ugu badani ay waxbarasho jaamacaddeed qaataan. Qaabkaas ayaan ku hayn karnaa qiime-abuurka kuna abuuri karnaa goobo shaqo. Dadka oo aan lahayn waxbarasho sare waxa ay keenaysaa in ay adkaato in aynu sii lahaano bulshada-daryeelka iyo dhammaan dheefaha daryeelka.
Waxbarashada dugsiga sare waa lacag la’aan.
Ardaydu buugaagta iskuulka ayey ka amaanaysanayaan, iyagaa se soo iibsanaya qalabka ay wax ku qoranayaan iyo wixii la mid ah.